Tavoahangy mena | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Tavoahangy mena
Tavoahangy Aphrodite f1 famariparitana faran'izay haingana
Ny lanjan'ny voatabia amin'ny sakafo isan'andro dia sarotra ny mandiso fanantenana. Mahasalama, salama, mifototra amin'izy ireo ianao afaka mahandro sakafo isan-karazany. Ny mpamboly tsirairay dia manandrana manangona ireo karazan-tsakay izay mitondra voly lehibe, mora miorim-paka, dia sarotra sy tsy mendrika.
Ny karazany tsara indrindra amin'ny voatabia: famaritana, tombony, tsy fahampiana
Ny mpamboly mpikarakara dia mety ho liana amin'ny fanontaniana tokony hambolena mba hahazoana vokatra tsara. Ity lahatsoratra ity dia ho an'ireo izay te hahomby amin'ny fitomboan'ny voatabia. Raha ny marina dia misy karazana voatabia samihafa, ary samy hafa amin'ny tsiro, loko, habe ary toetra hafa. Noho izany, raha mametraka tanjona ho anao ianao mba hahazo voatabia mofomamy, dia ity vaovao ity dia ho anao.
Vary varimbazaha ho an'ny trano fonenana
Ny mpamboly iray dia te hanao ny zavatra tiany indrindra - ny zaridaina - tsy amin'ny fahavaratra ihany fa amin'ny ririnina. Mba hanaovana izany, dia tonga ireo olona manana toeram-ponenana - faritra voaaro, izay ahafahanao mampitombo ny vokatra samihafa amin'ny toetr'andro sy ny toetr'andro. Raha efa nanamboatra trano fonenana ianao ary mitady karazana voatabiha izay azo antoka fa hitombo ao amin'ny tranokalanao, dia ny valiny dia ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tomato Budenovka: ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana
Ny Tomatoes (na voatabia) dia afaka manamboatra latabatra rehetra, mampitombo ny sakafom-pahalany sy ny hafanana (be dia be ny mainty hoditra dia ampiasaina amin'ny famokarana salady, fa koa ho an'ny maintin'ny katsaka na kafe). Mba hisafidianana vokatra tsara iray izay mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra takiana aminao, dia mila manandanja kely ny tenanao manokana amin'ny zavamaniry.
Ahoana no hikarakarana ireo voatabia Liang
Sarotra ny misafidy karazana voatabiha iray amin'ireo karazana sy karazany maro isan-karazany. Ny ankamaroan'ny mpamboly sy ny zaridaina dia maniry ny hamboly amin'ny karazam-pahaizana efa fantany sy voamarina. Ary iray amin'ireo malaza indrindra ny voatabia Liana. Ny endriky ny varotra Lyana Ny fanatsarana azy aloha dia mampiavaka ny varotra.
Ny fo Tomato Bull: mitombo sy mikarakara
Maro ireo zaridaina mamboly voatabia, mahaliana ny fomba hanatsarana ny tavy "Bull Heart" eny an-tsaha. Hodinihinay miaraka aminao ireo singa mampitombo io karazana mahaliana io. Fantatrao ve? Tamin'ny tapaky ny taonjato XVI dia tonga tany Eoropa ny voatabia. Nandritra ny fotoana lava dia voatazona ireo voatabia ary tsy misy poizina akory.
Tadiavo ny Tomatoes Pink Honey
Maro ny mpamboly matihanina, ary na dia mpamboly amina mpamboly aza, dia miezaka hatrany hahazoana vokatra tsaratsara kokoa, izay manery azy ireo hanao fanandramana sasany miaraka amin'ireo karazana legioma, voankazo sy voankazo. Amin'izao fotoana izao dia nahavita namoaka vokatra manan-danja maro isika, anisan'izany ny voatabia Pink Honey.
Ahoana no hananana tomato "De Barao" ao amin'ny zaridinao
Amin'izao fotoana izao, voatabia dia vokatra mahazatra. Ny mponin'ny lohataona sy ny zaridaina dia mihevitra azy io ho fitsipika hanamboarana an'io legioma io eo am-pandriana. Amin'izao tontolo izao dia misy karazana voatabia marobe, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy manan-tsahala sy matsiro amin'ny fomba samihafa. Saingy eo amin'ireo karazana voatabia voatabia ireo "De Barao" dia mendrika manokana.
Ahoana ny fomba hananganana "Prince Black", hambolena sy hikarakarana voatabia "mainty"
Ny "Printsy mainty" dia fantatra voalohany indrindra amin'ny loko marevaka matevina amin'ny voany. Ny ambiny kosa dia ny karazana tomato avo lenta be dia be. Ny "Prince Black" dia nesorin'ny mpamboly avy any Shina. Ny jeneraly jeneraly dia nampiasaina tamin'ny fambolena azy, saingy ny karazana dia tsy heverina ho GVO, noho izany dia afaka mampiasa ireo karazana voatabia ireo ny mpihinana sakafo ara-pahasalamana tsy misy tahotra.
Ireo singiolary amin'ny fitomboan'ny voatabia "Dubrava" ao amin'ny dacha
Anatin'ireo karazana voatabia rehetra eny an-tsena ankehitriny, miezaka ny misafidy ireo izay tsy misaina rehefa zarazaraina eny an-tsena, tsy mila garter sy pasynkovaniya. Ireo tombontsoa rehetra ireo dia manana karazana voatabia voatabia. Tendrombohitra Dubrava: karazana karazana Io karazana voatabia io dia manana haavo mitovitovy habe - tsy mihoatra ny 70 santimetatra ny haavony.
Ny endriky ny voatabia voatabiha tomato, maniry sy mikarakara voatabia voatabiha
Ny tomato dia legioma malaza eo amin'ny zaridaina zaridaina. Ny habaka dia malalaka: vao haingana, miaraka amin'ny fianarana faharoa sy voalohany, fitehirizana. Ny fahasarotana amin'ny fambolena, toy ny toetr'andro, dia mahatonga ny mpamboly hampivoatra vaovao, manohitra ny toetry ny toetr'andro, ary amin'ny karazana aretina.
Ny endriky ny fitomboan'ny tantely dia manidina ao amin'ny zaridaina, manangona ary mikarakara voatabia mavo
Ny karazam-pirazanana samihafa amin'ny voa sy ny zana-ketsa voly dia namorona olana sasantsasany ho an'ireo izay tia mihady ao amin'ny zaridainy manokana. Lasa sarotra ny nisafidy, nipoitra tao amin'ny lavaka mangitsokitsoka. Angamba ny endrika tsy mahazatra dia ny mololo izay mandresy ny kirany miaraka amin'ny tsimok'aretin'ny Hazo amin'ny fankasitrahany.
Ahoana no ahafahana maniry tomato "Pertsevidny", indrindra ny fambolena sy fikarakarana voly
Tomaty - iray amin'ireo fambolena zaridaina malaza indrindra. Afaka hita any amin'ny zaridaina rehetra izy ireo. Mandritra ny fisian'io legioma io, maro ireo karazana voavolavola izay manana toetra isan-karazany ary mety amin'ny fahasamihafana tanteraka. Tazo "Pepper": famaritana sy varieties Tomato "Pepper" dia manondro ireo karazan-tsarimihetsika mifandraika amin'ny legioma hafa.
Tendrombohitra Shuttle: famaritana karazana, rendrarendra, fambolena sy fiahiana
Ny Tomatoes dia vahaolana tsara ho an'ny mpamboly. Tena tsotra ny mampitombo azy ireo amin'ny teti-dratsinao, ary misy tombony be amin'izy ireo. Ankoatra ny lanjany ara-boajanahary, ny tomato dia manankarena amin'ny vitamina sy ny sakafo, ary afaka manamboatra lovia izy ireo. Mba hahafahantsika mankafy ity zavamaniry mahafinaritra ity, dia namoaka karazana voaloham-bolo maro ny mpamboly, ary anisan'izany ny voatabia samihafa Shuttle, izay hita matetika any amin'ny farafara.
Tomato Marina Grove: fambolena, fikarakarana, tombontsoa ary tsy fahampiana
Ny mpamboly sy ny mpamboly dia mitaky ny vokany ary matetika tsy faly amin'izy ireo. Na ny manam-pahaizana za-draharaha aza dia tsy afaka mampifangaro ny tsiron'ny voankazo amin'ny vokatra lehibe. Mihatra tanteraka amin'ny voatabiha izany. Tombom-bozaka maro no manandrana be rehefa ampiasaina vao haingana, saingy tsy mety tsara amin'ny fiarovana, ary ny mifamadika amin'izany.
Tomato "Kate": ny famaritana, ny vokatra, ny endriky ny fambolena sy fiahiana
Ny karazan-tsimparifary "Kate" dia manaporofo tanteraka ny karazana voatabia. Miaraka amin'ny toetrany tsara, toy ny fanoherana ny aretina sy ny toetr'andro, ny karazana voatavo "Katya" dia nahazo ny fankasitrahana ireo mponina an-tapitrisany an-tapitrisany. Na ny mpamboly avy any an-tsaha aza dia afaka manamboatra voatabia toy izany, satria tsy mila fitsaboana manokana.
Ahoana no fomba hitomboan'ny "Raspberry giant", fambolena sy fikarakarana voatabia ao an-jaridaina
Ny karazana voatabia "Raspberry Giant" dia nalaza noho ny tsirony sy ny habeny. Mahazo ny zaridaina amin'ny loko mahafinaritra, ny tsirony ary ny vokatra izy. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hananganana voatabia "Raspberry Giant", famaritana ny karazana sy ny fikarakarana fikarakarana. Ny "Raspberry Giant": ny famaritana sy ny toetoetran'ny karazana Tomato "Raspberry Giant" dia karazana fiterahana, ny fambolena izay tsy mitaky fanaraha-maso ny fitomboan'ny vokatra, noho izany, tsy ilaina ny hanongam-pahaizana.
Mikado Pink: Ahoana no hampitomboana tomatesa tsy mety
Ny tsiron-tsakafony, ny endriny sy ny vokatra azo avy amin'ireo karazana voatabia midadasika dia "nahazo tombotsoa mahafa-po ny mpanjifa" Mikado Pink ". Nandritra ny 2 taona niainana, io karazam-boninahitra nalaza nataon'ny Eoropeana io dia nahazo ny anarana tsy fantatra anarana hoe "imperial". Andao isika hipetraka amin'ny endriky ny voatabia "Mikado mena" amin'ny toetra sy ny fikarakarana.
Tomaty "Bobcat": famaritana ny karazany sy ny fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana
Ny zaridaina rehetra dia te-hanana voatabia eo amin'ilay tetika izay hahafaly ny tsiro sy ny vokatra. Ny iray amin'ireo karazana ireo dia natokana amin'ny famerenana anio. Tomaty "Bobcat": famaritana sy endri-javatra Aleo jerentsika hoe inona io karazana io miavaka sy inona no tokony hitodihanao rehefa lehibe. Famaritana ny kirihitra Ny zavamaniry dia manondro ny haben'ny varotra.
Ny toetra sy ny endriky ny voatabia "Mpiambina mena"
Androany dia misy karazana voatabia maromaro. Ny malaza dia ny karazana "Guard Guard", izay horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity. Tendrombohitra "Guard Guard": ny tantaran'ny fiompiana hybrid Any amin'ny faritra maro any avaratra, izay fotoana fohy ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra, vao haingana dia misy olana amin'ny fitomboan'ny voatabia.
Ny endriky ny voatetika tomates "Sugar Bison" ao anaty trano fonenana
Ny Tomato "Bison Sugar" dia tsy mitovy amin'ny karazany hafa amin'ny "havany", ary nahazo fanamarihana manokana avy amin'ny mpamboly maro. Ary amin'izao fotoana izao dia hianatra ny famaritana sy ny fampiharana ny karazany ianao, ary koa ny agrotechnology ny fambolena mihinana ao amina trano fisotroana. Ny tantaran'ny fanesorana voatabia "Sugar bison" Ny karazana Tomato "Sugar Bison" dia namelona ireo zaridaina any Rosia tamin'ny alalan'ny fambolena.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Tavoahangy mena